10 smartphones kachasị ike nke February 2020, dị ka AnTuTu | Gam akporosis
Dị ka ọ dị na mbụ, AnTuTu na-akọkarị akụkọ kwa ọnwa ma ọ bụ, kama nke ahụ, ndepụta nke njedebe kachasị ike n'ahịa, ọnwa site n'ọnwa. Ya mere, na ohere ohuru a anyi na egosi gi onwa February nke afo a, nke bu nke ikpe azu putara. Ka ahụ!
E gosipụtara ndepụta a n'oge na-adịbeghị anya, ma, dị ka anyị si pụta ìhè, bụ nke February gara aga, nke bụ ya mere AnTuTu nwere ike itinye mgbatị na nke a na ọkwa ọzọ nke ọnwa a, nke anyị ga-ahụ n'April. Ndị a bụ ndị smartphones kachasị ike taa, dị ka usoro nyocha si dị:
Nhazi nke smartphones kachasị mma nke February 2020
Dịka nkọwa zuru ezu na ndepụta anyị jikọtara n'elu n'agbanyeghị eziokwu na ọ bụ na Chinese, ihe ohuru Xiaomi Mi 10 Pro na Xiaomi Mi 10 ha nọ na ọnọdụ abụọ mbụ, nke nwere 594,069 na 564,327 n’otu n’otu, na odighi oke onu ogugu n’etiti ha.
Onye nke atọ, nke anọ na nke ise ka ndị bi na ya iQOO Neo 855, iQOO Pro 5G y OnePlus 7T, nke nwere 503,407, 500,852 na 496,009, n’otu n’otu, imechi ebe ise izizi na ndepụta AnTuTu.
10 smartphones dị ike nke Jenụwarị 2020, dị ka AnTuTu
N'ikpeazụ, nkera nke abụọ nke okpokoro ahụ mejupụtara nke OnePlus 7T Pro (496,007), Vivo NEX 3G (495,579), Sọpụrụ V30 Pro 5G (491,120), Ekwentị Asus ROG 2 (489,827) na Realme X2 Pro (483,370), n’otu usoro, site na isii ruo nke iri.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » 10 smartphones kachasị ike nke February 2020, dị ka AnTuTu
Ọkwa ahụ ọ na-enye gị nsogbu na Xiaomi ma ọ bụ Redmi gị? Ya mere ị nwere ike zoo ya!
Samsung Galaxy M21 ga-abụ ihe ọ bụla karịa a ma ama Galaxy M30s